AH: Valentine's Day ဟာသာများ
ဒါက အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို မဖမ်းမိခင်တုန်းက ဟာသလေးပါ။
ဒေးဗစ် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့အဖေကို မေးနေပါတယ်။
ဒေးဗစ်။ ။ “ဖေဖေ ဗယ်လင်တိုင်းဆိုတာက Christian ဘုန်းတော်ကြီး စိန့် ဗယ်လင်တိုင်းကနေ စတာဆိုတော့တွေ ကျွန်တော့်တို့လို ဂျူးတွေက ဗယ်လင်တိုင်နေ့မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးရင် ဘုရားသခင်က စိတ်ဆိုးမှာလားဟင်”
အဖေ ။ ။ “အင်း…. ဘုရားသခင်ကတော့ စိတ်ဆိုးမှာ မဟုတ်ပါဘူး သားရဲ့။ သားက ဘယ်သူ့ကို ပေးချင်လို့လဲ”
ဒေးဗစ် ။ ။ “သားက အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို ပေးချင်တာ”
အဖေဖြစ်သူ အနည်းငယ် လန့်သွားသည်….
အဖေ။ ။ “သားက ဘာဖြစ်လို့ အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို ပေးချင်ရတာလဲ”
ဒေဗစ်။ ။ “အင်း.. သားထင်တာကတော့ သားလို အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဂျူးကလေးလေးက သူ့ကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် အိုစမာကြီးက သူ့အပေါ်မှာ သားတို့တွေက ကောင်းသေးသားပဲ လို့ ထင်မှာပေါ့၊ အဲ့ဒီတော့ သားတို့ကို နည်းနည်းတော့ ချစ်လာမှာပေါ့။ သားပို့တာကို မြင်သွားတဲ့ တခြားကလေးတွေကလည်း သားလိုပဲ ဗယ်လင်တိုင်း လက်ဆောင်လေးတွေကို အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကြီးဆီကို ပို့ကြမှာပေါ့။ အဲ့ဒီအခါကျတော့ အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကြီးဟာ သားတို့ကို ပြန်ချစ်လာပြီးတော့ သူ့အပေါ် ကလေးလေးတွေက အဲ့ဒီလို သဘောထားရှိကြောင်း၊ သူ အမေရိကန်တွေကို ဘယ်တော့မှ မမုန်းတော့တဲ့ အကြောင်း လူတွေကို လျှောက်ပြောတော့မှာပေါ့။”
ဖခင်ဖြစ်သူ ဟတ်ထိသွားသည်။ ထို့နောက် ကြင်နာသော လေသံဖြင့်
ဖခင်။ ။ “သားရယ်၊ သားရဲ့ မေတ္တာတရားဟာ လေးစားစရာ ကောင်းလှချည်လားကွာ၊ အဖေ့ တစ်သက်မှာ ဒီလို စကားမျိုး ဒီတစ်ခါပဲ ကြားဖူးသေးတယ်။”
ဒေဗစ်။ ။ “ဟုတ်တယ်အဖေရဲ့…. အိုစမာကြီးက ၀မ်းသာပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းကို လူတွေကို လျှောက်ပြောဖို့ ပုန်းနေတဲ့ နေရာက အထွက်၊ အမေရိကန် စစ်တပ်က သူ့ကို ပစ်သတ်လိုက်ရော”
မေး။ ။ဘာဖြစ်လို့ မြှားနတ်မောင် တောင်မှ ရှေ့နေတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို သူ့ရဲ့ မြှားနဲ့ ထိအောင် မပစ်နိုင်ရတာလဲ?
ဖြေ။ ။ သေးလို့….
ရိုဂျာတစ်ယောက် သူ့ချစ်သူကို ဗယ်လင်တိုင်း နေ့အတွက် လက်ဆောင်ပေးရန် နာမည်ကြီး လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်တွင် လက်ကောက် တစ်ကွင်းလာဝယ်သည်။
ဆိုင်ရှင် ။ ။ လက်ကောက်မှာ မောင်ရင့် ကောင်မလေးနာမည်ကို ထွင်းပေးရဦးမလား
ရိုဂျာ။ ။ “အင်း… နာမည်အစား “အချစ်ဆုံးသော ချစ်ကလေးသို့” ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးပဲ ထိုးပေးပါ
ဆိုင်ရှင်။ ။ “ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ၊ အရမ်းကို ချစ်တတ်တဲ့လူပဲ”
ရိုဂျာ။ ။ “အင်း… ဒီတစ်ယောက်နဲ့ အဆင်မပြေလည်း နောက်တစ်ယောက်ကို ထပ်ပေးလို့ ရတယ်လေ..”
အီမာ တစ်ယောက် အိပ်ယာမှ နိုးလာသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို လှမ်းပြောသည်…
အီမာ။ ။ “ဒါလင်ရေ.. ညက အိပ်မက် မက်တယ် သိလား၊ ဒါလင်က ချစ်ကို ပုလဲဆွဲကြိုး လှလှလေးဝယ်ပေးတယ်။ အဲ့ဒါ ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟင်…”
ခင်ပွန်း ။ ။ “ညကျတော့ သိရမှာပေါ့ အချစ်ရယ်”
ထိုနေ့ည ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ပြန်လာသည်။ အိတ်လှလှလေး တစ်အိတ်ဆွဲလာသည်။ ချစ်သက်လျှာ အီမာကို လှမ်းပေးလိုက်သည်။ အီမာ ၀မ်းသာအားရ ဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်…
အထဲတွင် “အိပ်မက် နမိတ် နှင့် အသားလှုပ် ကျမ်း” ဟူသော စာအုပ်ထွက်လာသည်။
အလုပ်ထဲတွင်ဖြစ်သည်။ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့တွင် လက်ထပ်မည်ဟု ရည်ရွယ်ထားသူ စင်ဒီ က အီမာ့ကို မေးသည်။ လက်ထပ်ပြီးတဲ့ခါ အပျိုဘ၀နဲ့ ဘာကွာလဲဟင်…
အီမာ ။ ။ “အင်း… ပထမ ၁၀နှစ်တော့ တော်တော်ကြီးကို ရုန်းကန်ရတယ်….”
စင်ဒီ ။ ။ “ဟုတ်လား… ဒါနဲ့ အီမာ လက်ထပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ..”
အီမာ ။ ။ “၁၀ နှစ်”
ဒေးဗစ် နဲ့ အီမာတို့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့တွင် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြသည်။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံ တစ်ခုလုံး အမှောင်ချထားသည်။ ခဏကြာတော့ လိုက်ကာပွင့်သွားသည်။ ကြော်ငြာများထိုးသည်။ သို့သော် အသံမထွက်။ အားလုံး ငြိမ်သက်စွာကြည့်နေကြသည်။ ရုပ်ရှင်ပြသည် အသံမထွက်။
ခဏနေတော့ လူတစ်ယောက်ထအော်သည်…. “ဒီမှာ ဒါက နောက်စရာ မဟုတ်ဘူး။ ကဲ ဖွက်ထားတဲ့ ရီမုတ် ကွန်ထရိုး ထုတ်ပေးပါ”
မိန်းမ ။ ။ “ရှင့်လို လူမျိုးကို လက်ထပ်မိတာကိုက ကျွန်မ ရူးနေလို့…”
ယောက်ျား။ ။ “အင်း….. အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ်လည်း မင်းကို ချစ်နေတာနဲ့ အဲ့ဒီအကြောင်းကို သေသေချာချာ မသိခဲ့ဘူး”
Posted by AH at 2/14/2012 08:35:00 AM
မောင်ဘုန်း February 14, 2012 at 8:58 AM
ရီ ... သွားပါတယ် နောင် တော် ...
မဒမ်ကိုး February 14, 2012 at 9:41 AM
စာရင်းပြပြီးဝယ်လိုက်တယ် ခွီးးးး)))))
စံပယ်ချို February 14, 2012 at 3:19 PM
တော်သေးတာပေါ့ ချစ်လင်မောင်လွင်ပြင်ဒီစာကိုအရင်လာမဖတ်လို့မဟုတ်ရင် အသားလှုပ်
ဟားဟား နောက်ဆုံးရန်ပွဲက အကြိုက်ဆုံးပဲ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 14, 2012 at 6:05 PM
:):) ဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူး ဒီနေ့..တော်တော်ညစ်နေတာ :P
မြသွေးနီ February 14, 2012 at 6:15 PM
ဘိုဖြူ February 14, 2012 at 7:48 PM
Thwin May 26, 2013 at 10:44 PM
မပုလေး September 5, 2013 at 1:37 PM
ဟာသဆို လာထား အကုန်ကြိူက်ပြီသား